शान्तिपूर्ण क्रान्तिलाई हिंसात्मक बनाउन खोज्ने केपी सरकारले अब हुने विकसित नयाँ परिवेशको जिम्मा लिन सक्छ ? — Sanchar Kendra
सानो छँदा हिउदमा खोला सानो हुन्थ्यो र मलाई त्यतिबेला लाग्थ्यो कि खोलो ठुलो भइदिए पौडी खेल्न कती रमाइलो हुन्थ्यो होला । जब बर्खामा खोलो ठुलो हुन्थ्यो हुँदा पौडी खेल्ने आँट नै आउँदैन थियो । सन्दर्भ र परिस्थिती उस्तै उस्तै, अर्थात् के अब यो फासिवादी केपी सरकारले क्रान्तिको बेग रोक्न सक्छ ? शान्तीपूर्ण क्रान्तिलाई हिंसात्मक बनाउन खोज्ने केपी सरकारले अब बिकशित हुने नयाँ परिवेशको जिम्मा लिन सक्छ ?